Andiswa xidig kubadda cagta - Storybooks ESL
Andiswa xidig kubadda cagta Andiswa Soccer Star
Abdikadir Abdullahi Ali, Omar Abdi Yare, Mohamed Shukri Sheikh, Sahal Ahmed Bashir, Abdi Mohmed Warsame, Salat Abdi Msulwa, Mohamed Abdi Sheikh
Andiswa waxay daawatay wiilal kubadda cagta ciyaarayo. Waxay rajeysay in ay awoodi laheyd in ay ku biirto ayaga. Waxay weydisay tawabaraha in ay tawabar laqadani karto ayaga.
Tawabaraha gacmihiisa ayuu saartay simihiisa. “Isuulkan, wilasha kaliya ayaa loo ogolyahay in ay ciyaaraan kubada cagta”, ayuu yidhi.
Wiilasha ayaa u sheegeen in ay aado oo ay ciyaarto kubada gacanta. Waxey dhaheen kubadda gacanta waa gabdhaha Kubadda cagta na waa wilasha. Andiswa waa ay ka xumaatay.
Maalinki xigay, iskuulki ayaa lahaa ciyaar weyn o kubada cagta ah. Tawabaraha waa uu walwalsanaa sababtoo ah ciyaaryahankiisi ugu wanaagsanaa ayaa xanuunsaday mana uusan ciyaari karin.
Andiswa waxa ay ku oroday tawabarihi waxa ayna ka bariday in uu u ogolaado ciyaarta. Tawabaraha ma uusan hubin wax uu sameeeyo. Kadib waxa uu goaansaday in Andiswa ku biiri karto kooxda.
Ciyaarta waxa ay aheyd mid adag. Qofna gool ma dhalinin ilaa kala badhki waqtiga ciyaarta.
Waqtigi qeybta labaaad ee ciyaarta mid kamid ah wiilashi ayaa Andiswa u gudbiyay kubaddi. Waxay ugu dhaqaaqday si degdeg leh xagi birta goolka. Si adag bey u laaday kubbadi waa ayna dhalisay googlkii.
Dadki badnaa waxay la dhaceen farxad saaid ah, Ilaa maalinkaas, gabdhaha na waa loo ogoladay in ay ciyaaraan kubada cagta ee iskuulka.
Written by: Eden Daniels
Illustrated by: Eden Daniels
Translated by: Abdikadir Abdullahi Ali, Omar Abdi Yare, Mohamed Shukri Sheikh, Sahal Ahmed Bashir, Abdi Mohmed Warsame, Salat Abdi Msulwa, Mohamed Abdi Sheikh
Source: Andiswa Soccer Star from African Storybook
Carruur xabkeed Waa maxay sababta aysan jeerta ulahayn timo Zama waa mid aad u wanaagsan! Kalaay waxay la hadashaa dhirta Go’aan Tom muus iibiyaha Tingi iyo lo’dii Ciqaab Ri, Eey iyo Sac Nin aad u dheer